Kedu ihe ị ga-eme mgbe hemp na-anwale ọkụ? Nzọ ọkwa THC na azụmaahịa gị
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ọnwụnwa ana - anwale ọkụ
Gịnị bụ Hemp na-ekpo ọkụ?
Watch Onye ọka iwu Cannabis, Tom, kọwaa ihe ị ga-eme mgbe hemp na-enwu ọkụ maka ọkwa ya delta-9 THC.
Kpọọ banyere hemp ịnwale ya na-ekpo ọkụ
Na-achọ Ozi Mgbasa Ozi Hemp - Pịa ebe a.
"Hemp na-ekpo ọkụ" putara hemp onye agbago uzo oche-9 THC gafere uzo 0.3% nke iwu steeti na nke gọọmenti etiti tiri. Ọtụtụ mgbe iwu steeti na-ahapụ ụfọdụ mkpụkọ nke mkpịsị ugodi, ịhazigharị, na nchedo maka ịmịcha ahịhịa nke hemp na-anwale ọkụ ya na ọkwa THC. Otutu ọgba aghara dị na usoro nnwale dị na obere mkparịta ụka dị n'etiti delta-9 THC ma e jiri ya tụnyere tetrahydrocannabinolic acid (THCa) nke na-ebute nsogbu na ịnwale ihe ọkụkụ hemp maka nnabata na nkọwa ọkọlọtọ hemp ụlọ ọrụ - nke cannabis na THC bred wepụta ya, ma ọ bụ opekata mpe 99.7% nke ya. Frommị mkpụrụ site na mkpụrụ akụ ma e jiri ya tụnyere klọọkụ ma ọ bụ ọdịbendị anụ ahụ na-ebulite “ihe ọkụ ọkụ.” Generationdị F, F1 ma e jiri ya tụnyere F5 dịka ọmụmaatụ, na-enyekwa aka na nkwụsi ike nke mkpụrụ ndụ ihe nketa heC THC.
esi zere hemp na-ekpo ọkụ
jiri nkwekọrịta edere zụta
na-eji gbazere mkpuru osisi
too hemp n’otu aka ahu o toro mgbe edeputara ya
zere imesi osisi gị ike
nwalee n’oge okooko na HPLC
jiri nlezianya lelee hemp maka itolite
soro na steeti mkpokọta ihe ubi gị chọrọ
ọ bụrụ na nnwale na-ekpo ọkụ na-agbanwe ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ma nwalee ọzọ
kpọọ onye ọka iwu gị ma ọ bụrụ na nsogbu abịa
Ndụmọdụ Maka Hemp ahụ na-anwale
Ya mere, ọtụtụ ndị ọrụ ugbo na-eche ihe mere eme ma a bịa n'ule ule. Ojiji ha na-anwale ihe dị ọkụ oge niile, ọ bụ mgbe ahụ ka ndị ọrụ uwe ojii bịara ebe ahụ. Iji zere ọnọdụ a, ị ga-amatarịrị ihe ị ga-eme mgbe hemp nwa gị na-ekpo ọkụ. Ndị a bụ azịza ya.
Gịnị Bụ Iwu Ndị Ikike
Na ọtụtụ steeti, ndị gọọmenti ịgba maka Ọkwa THC na hemp bụ 0.3%. Nke a pụtara na hemp gị ga-enwerịrị pasent ma ọ bụ obere nke THC. A na-eme nnwale site na usoro dị iche iche, mana ọtụtụ n'ime ha na-atụle ọkwa nke mmiri dị na hemp. Nkewa nke cannabinoids, terpenoids, na flavonoids bụ usoro a na-ejikarị ekpebi ma ọ bụrụ na hemp nwere nkesa zuru oke.
Aschọta parampat ndị a nwere ike imetụta nhazi nke hemp. Nke a bụ mgbe nsogbu bilitere. Ọ bụrụ na nnwale ahụ ezughi oke, hemp gị nwere ike igosipụta ọkwa THC dị elu, nke na-etinye gị n'ọnọdụ ịrịọ maka enyemaka. Imirikiti ndị ọka iwu nwere ike inyere gị aka idozi nsogbu a n'ihi na ule nwere ike gbanwee ọkwa THC nke hemp n'ozuzu ya. Ọ kachasị mma iji usoro nnwale nke na-enye gị nchekwa zuru oke mgbe ọ na-abịakwute ọkwa THC na hemp gị.
Ndị ọrụ ugbo n'ofe ala ahụ nwere ọtụtụ mkpụrụ dị iche iche na ịkọ mkpụrụ ọ bụla nwere ike ịbụ ihe ịma aka. Ọtụtụ mgbe, mkpụrụ ọhụụ etinyere n’ala na-ebufe kemịkalụ ọzọ mana ha nwere ọkwa ọkwa THC dị elu. Nke a bụ nke a na-ahụ anya na afọ mbụ nke ịkọ.
Iji soro ụkpụrụ, ndi oru ugbo aghaghi iku nkpuru nke egosiputara na ule THC. N'otu oge ahụ, ha kwesịrị ị paya ntị na ụzọ owuwe ihe ubi nke nwere ike ịbawanye ma ọ bụ wedata nsonaazụ nke nnwale THC.
Mgbe ịmechara usoro iwu nchịkwa ahụ, a ga-ebipụ hemp na-adịchaghị mma maka ojiji. nke bu nnukwu nsogbu nye ndi oru ugbo nke butere otutu ego nye oganihu. Ha ga-ewepụ mkpụrụ niile wee bido n’oge ọzọ.
Inbanye na ụlọ ọrụ hemp na-enye gị ọtụtụ ohere iji nyochaa ahịa ahụ. N'oge ụfọdụ, hemp nwere ike ịnwale mmiri ọkụ mana enwere ike iji hemp a maka ọtụtụ ngwaahịa dị iche iche. Ọ bụrụ na ị na-eme usoro iwu iji tobe hemp maka iji ntụrụndụ, mgbe ahụ ị nwere ike ịnwe hemp na-anwale ọkụ.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ekwuru maka mkpụrụ osisi maka nzube ahụike, ịnweghị ike igwu egwu. N'okwu a, ọkwa nke THC ga-abụrịrị nke ziri ezi. Bestzọ kachasị mma iji dobe ọkwa n'ohere dị mma bụ nyochaa nyocha nke ọ bụla.
Ihe ị ga-eme Ọ bụrụ na Hemp nwalee na-ekpo ọkụ
Ọ bụrụ na hemp nwa gị na-enwu ọkụ, ị nwere ngwọta dị iche iche. Otu n’ime ha bụ ịnata echiche nke abụọ ma a bịa n’ule. You nwere ike izipu hemp maka nnwale ọzọ nke ga-enyocha ihe nke THC. Ọ bụrụ na nnwale nke abụọ gosipụtara otu nsonaazụ ahụ, hemp gị nwere ọkwa THC dị elu.
Ihe ọzọ ị ga - eme ma ọ bụrụ na hemp na - anwale dị ọkụ bụ ịkpọtụrụ onye na - ere mkpụrụ gị. Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-ahụ maka ịdị mma nke mkpụrụ, ha ekwenyeghikwa ka eresị ndị ọrụ ugbo mkpụrụ ndị na-ekwesịghị ekwesị. Ọ bụrụ na ha mee nke ahụ, ha na-emebi iwu, ma nwee ike ibido ikpe ahụ. Ndị na-ere mkpụrụ ga-agbaso iwu ndị isi mgbe a bịara ego, nhazi, na oke nke mkpụrụ. Ha ga-eme ka ị mata banyere mkpụrụ nke mkpụrụ nke ị na-azụ n’aka ha.
Ọ bụrụ na gị na onye na-ere ere na-enwe nkwekọrịta, ọ dị mma ka ịgụọ ya ma lelee ihe ndị ahụ. A na-akọwa iwu na ụkpụrụ niile n'enweghị ihe ngosi. Ọ bụrụ na n'ime nkwekọrịta ahụ ga-anọ na mkpụrụ gị toro nke ọma ma tozuokwa nke ọma, mgbe ahụ ị nwere ikike ịma etu hemp ga-esi ruo ọkwa nke amachibidoro nke THC.
Mkpebi kachasị mma ị ga - eme ma ọ bụrụ na hemp nwalee na - akpọ oku gị ọka iwu. Kpọọ onye ọka iwu gụrụ akwụkwọ na ngalaba a, ka ọ nwee ike inye nkwado ziri ezi. Itolite hemp bụ usoro siri ike na usoro iwu na arụ ọrụ dị mkpa. Ekwesịrị ịme ka onye ọka iwu gị ikpe ahụ, karịchaa ma ọ bụrụ na ị na-eche na ị mebiri emebi na usoro ahụ.
Mgbe hemp a na-anwale ọkụ, ihe kachasị mma bụ imebi hemp. Imebi ihe nwere ike isi ike n ’ihi na ighara itinye ego na oge. Agbanyeghị, ọ bụ naanị usoro iji wepu hemp na ezughi oke ma lekwasị anya na hemp nke ruru ụkpụrụ.
Mgbe ị na-ebibi hemp, gbaa mbọ hụ na ọnweghị akara fọdụrụ. N'ebe mpaghara hemp na-ezughị ezu, ala ahụ na-echekwa njirimara nke hemp na mkpụrụ ọ bụla ga-abịa n'ọdịnihu nwere ike inweta njirimara hemp ndị gara aga. Maka nke ahụ, ọ dị mkpa ka 'sachapụ' mpaghara ahụ kpamkpam.
N’oge ị ga-anwale hemp, ọ kachasị mma ịnwe nkwado nke ndị ọrụ nchịkwa. Ọ bụrụ na ha na-achọta mkpụrụ nke gafere ọkwa THC, ha nwere ike ịme gị ego. Ọtụtụ ndị ọrụ ugbo na-enweta ezigbo ụgwọ dị ala, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọkwa THC adịghị oke. N’aka nke ozo, ndi oru ugbo nke na etinyeghi ihe omuma ndi uwe ojii ma a bia na ibibi hemp, nwere ike inwe nnukwu nsogbu iwu.
Ihe ị ga - eme iji chebe Hemp
Iji zere nsogbu, ọ kacha mma iji nlezianya họrọ mkpụrụ hemp. Seedsfọdụ mkpụrụ nwere mmụba dị ukwuu na ọkwa THC, karịchaa mgbe owuwe ihe ubi. Maka nke ahụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịrapara na mkpụrụ a nwapụtara ma nwalere na-agbaso ụkpụrụ.
Inwe hemp na ọkwa THC dị elu dị ize ndụ ma ọ na-emetụta azụmahịa gị. Inyekwu oge iji gbochie nsogbu dị mma karịa ịnagide nsogbu nsogbu.
Dịka ọmụmaatụ, jiri mkpụrụ kwesịrị ekwesị ma tinye usoro ziri ezi na ụzọ owuwe ihe ubi. N'ihi ya, hemp gị agaghị anwale ọkụ ma ị ga-enwe ọtụtụ nhọrọ iji resị hemp n'ọtụtụ ndị na-ere ahịa. Mgbe hemp gị na-enwu ọkụ, jiri ike niile nke ndị ọka iwu na ụkpụrụ iji dozie okwu ahụ. Wayzọ a ị ga - ahụ na ị na - adị nchebe na usoro.
ihe ị ga - eme mgbe hemp gị na - achọ ihe ọkụ
Yabụ na ị naghị atụ anya ka ihe ọkụkụ gị mee ka ị na-eto wii wii n'ụzọ iwu na-ezighi ezi - nke ahụ dị mma, ọtụtụ iwu na-enye ohere ịhapụ ịkọ ubi nke hemp na-ekpo ọkụ. Mana tupu anyị aga n'ihu na nke a - cheta na nke a bụ ozi na ọ bụghị ndụmọdụ iwu, ka ịpịa dị ka ma ọ bụrụ na ị na-anụ ụtọ ọdịnaya ahụ ma denye aha maka akụkọ iwu cannabis.
Nọgidesie ike ruo ọgwụgwụ ka m ga-agwa gị ụzọ kachasị mma iji kpuchibe ugbo hemp pụọ n'ihe ize ndụ hemp a.
Ndumodu: ụzọ kachasị mma iji gbochie gị pụọ ịchafụ bụ nkwekọrịta ịzụta
Buru ụzọ jide n’aka na nnwale gị sitere na ụlọ nyocha dị mma ọ bụghị maka ngụkọta-THC, mana delta-9 THC - nke a bụ ọgwụ anwansi na-agwa ma ọ bụrụ na ị nwere hemp ma ọ bụ wii wii. Ekwesighi iji Gas Chromatography mee ule a - mana chromatography nwere nsogbu dị elu, ikekwe ya na nlegharị anya - LC-MS maka mkpụmkpụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị tụkwasịrị nsonaazụ ụlọ nyocha ahụ - mee ka ihe ọkụkụ ahụ nwalee ọzọ - ma eleghị anya ọ bụ ọfụma na echiche nke abụọ ga-egosi ihe dị iche iche - mkpụrụ ndụ ihe nketa na hemp abụghị otu, ọkachasị mgbe ito ya na mkpụrụ.
Ọzọkwa, ihe ọkụkụ hemp na 2019 na United States gbawara site na 50,000 acres na 2018 ruo 200,000 na 2019. Agụụ chọrọ hemp mkpụrụ ga-abụrịrị na -re ụfọdụ mkpụrụ nke na-adabaghị na mgbasa ozi ha ma ọ dịchaghị ka ọ bụ nke nwanyị ma ọ bụ na ọ dị ala na THC dịka ha gaara adị mgbe afọ ole na ole gafere nke ọma na mkpụrụ ndụ ihe nketa.
N'iburu nke ahụ n'uche, ị ga-echigharị na nkwekọrịta ịzụta mkpụrụ hemp gị mgbe ị nwetasịrị echiche nke abụọ - nke a kwesịrị ịgwa gị ihe onye na-ere mkpụrụ ahụ kpọsara - ọkwa nke THC tụrụ na pasent nke mkpụrụ nwanyị - ọ kwesịkwara ịnye maka ihe akpọrọ. n'okpuru Koodu Azụmaahịa Uwem (UCC) dịka ihe anaghị ekwekọ ngwongwo. O kwesiri ibu nkwekọrịta nkwekọrịta nke nyere onye zụrụ ya ọgwụgwọ ụfọdụ.
Ihe ị na - ekwu - gị na onye na - ere mkpụrụ gị abanyeghị na nkwekọrịta edere ederede wee kụọ ihe niile ị na --eme ka ndụ gị banye na hemp a. Ọ dị mma, ndị ọka iwu nwere ike inye aka na oke mgbe ọ na-abịa n'ịmanye ikike nkwekọrịta - mana anyị enweghị ike ịgafe oge. Ọ bụrụ na enweghị nkwekọrịta edere ede, usoro ndabara nke UCC ga-enye ụfọdụ nkọwa maka arụmọrụ nkwekọrịta gị. Biko jiri nkwekọrịta edere ede mgbe ị na-azụ mkpụrụ hemp n'ọdịniihu - nke a bụ ọdịda anyanwụ, yabụ kpachara anya mgbe ị na-azụ ahịa.
Yabụ mgbe ikwenyechara echiche nke abụọ, wee nweta otu nkwekọrịta ịzụta mkpụrụ gị, kpọọ ọka iwu gị ka ha hụ ihe ha chere banyere ya.
Kedu ihe bụ - ị nweghị ọka iwu maka na ị ga - agụkwa nke ọma, ọ bụ na ị bụghị nwoke nke na - enweghị akwụkwọ nkwekọrịta edere - nke ahụ, ọ dị mma - had nwetụla mmụọ nke ụbọchị - mba mara na iwepu mkpịsị aka m n'ahụ gị maka ịghara ikpuchi azụ gị tupu ịbanye n'ụlọ na-ere ahịa.
Gakwuru onye ọka iwu hemp - site na nke ahụ m pụtara na onye ọka iwu nwere ahụmịhe azụmaahịa na mmejuputa nkwekọrịta - na enwere m olile anya na ahụmịhe ọrụ ugbo ma ọ bụ hemp ka ha wee nwee ike ịghọta mmekpa ahụ na ụlọ ọrụ.
Ọka ikpe gị ga - enyere gị aka ịnyagharị ọ bụghị naanị iwu nke steeti gị - ma ọ bụ iwu Federal ma ọ bụrụ na steeti gị etinye ha na mmemme hemp ha - kamakwa ụkpụrụ na iwu maka ihe ọkụkụ hemp gị - nke nwere ike inye ọkụ maka hemp ọkụ. na-eto eto n'ụzọ na-enweghị atụ.
Kedu ụdị hemp dị na United States?
Dịka iche, echere m na 2019 nwere ike ịbụ afọ mkpụrụ akụ na-ebu ibu na United States - mana nke ahụ bụ naanị n'ihi na ọtụtụ acres nke akuku hemp ga-enyocha ọkụ n'ihi ụdị ọrụ ụlọ ọrụ hemp dị ọhụrụ.
Na-esote, oge erugo ịkpọtụrụ onye na-ere mkpụrụ gị. Azụmaahịa anaghị amasị ndị ọka iwu dị ka onye na - esote onye na - esote gị - yabụ amalitela na akwụkwọ ozi chọrọ. Dị ka o kwesịrị, ị tinyelarịrị nkeji okwu aka nri na nkwekọrịta ịzụ mkpụrụ dị hemp ma ọ bụrụ na ụdị ihe a mee. Na-emeso ndị mkpụrụ ndụ ihe nketa ebe a - ihe na-awụlikwa elu mgbe ụfọdụ mgbe mkpụrụ na-etinye aka. Ọ bụrụ n’ị na-emekọ ihe n’enweghị nkwekọrịta edere ede, n’olileanya na ụlọ ọrụ mkpụrụ ị zụtara dị mma ma nyere gị aka iweghachite ụgwọ ndị furu efu - kama ị na-ede ụyọkọ nyocha na post na social media ha. Ọ bụrụ na ihe adịghị njọ, ịbido mmadụ iwu abụghị ihe kacha mma ime.
Ga - ahụ mmebi gị nwere ike ịgụnye uru furu efu - mana nke ahụ bụ ịkọ nkọ na ụlọ ọrụ ohuru - yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke na - agaghị egosipụta, mana ụgwọ siri ike dịka mkpụrụ gị na nri gị, ọrụ gị - ndị a bụ mmebi dị mfe nke nwere ezi uche iji gbakee.
Mgbe ị nwesịrị ikpuchi ntọala gị ma jiri echiche nke 2 kwenye hemp na-ekpo ọkụ. Mgbe ahụ ị ga-agbaso iwu steeti gị iji kpuchido onwe gị dị ka onye na - emepụta ihe na - eleghara anya - cheta .3% maka delta-9 THC bụ njedebe dị n'etiti hemp na wii wii - n'okpuru iwu gọọmentị.
Yabụ na ókè ahụ dị n’etiti ileghara anya na ebumnuche bụ ahịrị na ọ bụrụ n’ịgafe - na ị ga - emejọ iwu mpụ - nke ị na - ekwesịghị ime n’ihi oke olu hemp na - eto na oke mpụ dị oke njọ - ọbụlagodi na steeti iwu n'ihi na ha chọrọ ikikere ị nweghi. . Yabụ eleghara anya mgbe ị ji n'aka na hemp dị oke ọkụ - ị ga - agbaso iwu ma chebe…. Butt.
Yabụ nke ahụ pụtara na ị ga-ebibicha hemp gị - ị gaghị eto mkpụrụ ahụ n'afọ na-esote ya n'ihi na ọtụtụ steeti na-achọ ka ị nwee ezigbo okwukwe, ma ọ bụ asambodo mkpụrụ, maka ime ka e jide n'aka na ihe ị kụrụ ga-abụ ụlọ ọrụ hemp na-abụghị wii wii. Steeti nwere oke afọ ole ị nwere ike ịghara ị mariụ wii wii ma chee na ọ ga-ebu ibu tupu i tinye akwụkwọ ikike gị.
Chọpụta ihe steeti gị chọrọ ibibi, ma ọ bụ wepụta ihe ọ nwere ike.
Eleghi anya i ghapu ahihia hem n’agha ma o buru na steeti n’eme ka gi nwaa ya ma were ya ere ka ahihia - ma ihe ndi ubi abughi ihe di nkpa. Ọzọkwa, ikike gị ịzụlite hemp dị mkpa karịa otu ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ dị njọ - yabụ gbaso iwu ma mara na nke a bụ oke ọdịda anyanwụ na ụlọ ọrụ na-eto eto nke chọrọ iji tozuo ma jiri ọdụ ụgbọ mmiri ahụ dị mma iji mee ka azụmahịa gị na-aga n'oge ọzọ.
Mplọ Hemp na-abịa Ọkụ
N'ikpeazụ, gị na onye na-ere mkpụrụ ahụ ga-ebilite ma ọ bụrụ na ọ bụ mmehie ha n'ezie na ihe ọkụkụ gị batrị. Jenetik maka CBD na THC dị aghụghọ - ụfọdụ mkpụrụ na otu ọnọdụ ga-eto n'ụzọ dị iche na ọnọdụ ọzọ - maka Illinois, Cherry Wine abụwo mkpụrụ kwụsiri ike - mana nke a bụ ụlọ ọrụ maka ịmepụta mkpụrụ ndụ ihe nketa ọhụụ, ịkọpụta ihe ọhụrụ - na anyị amaghị ihe ọ bụla. na-abịa ọzọ.
Na n'ihi na anyị na-agba ọbara nke teknụzụ cannabis - ka anyị tụgharịa - mana buru ụzọ nwee mmasị & tịnye aha ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nke a - n'ihi na ị ga-amata akụkọ akụkọ cannabis - ụbọchị ụka ọ bụla.
Iji mechie: ma ọ bụrụ na hemp's delta-9 THC larịị karịrị 0.3%, ikikere gị chọrọ ụfọdụ omume.
Nke a bụ ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ ihe ọkụkụ hemp na-abịa na ọkụ na THC.
Nweta echiche nke abụọ banyere ọkwa HEC hemp gị
Lelee usoro nkwekọrịta azụtara mkpụrụ nke hemp gị
Kpọọ onye ọka iwu cannabis gị
Nyochaa ihe iwu na iwu kwuru banyere hemp na ọkwa THC dị elu
Kpọtụrụ onye na-ere mkpụrụ gị gbasara nsogbu ahụ na ọkwa Hemp's THC
Soro ụkpụrụ na-enye gị ọdụ ụgbọ mmiri dị nchebe megide hemp na-ekpo ọkụ na-eleghara anya.
Ebibi hemp, ma ọ bụ wepụ ihe ị nwere ike
Mpempe akwụkwọ, ma ọ bụ banye na nkwekọrịta mmezi ma ọ bụrụ na onye na-ere mkpụrụ ga-akwụ ụgwọ maka ọghọm.